HEPA फिल्टर के हो?
HEPA उच्च दक्षता कण वायुको लागि एक संक्षिप्त रूप हो, त्यसैले HEPA फिल्टरहरू उच्च दक्षता कण वायु फिल्टरहरू हुन्। HEPA H14 फिल्टरले 0.3 माइक्रोन कणहरूको 99.995 प्रतिशत वा त्यसभन्दा साना पनि कब्जा गर्नुपर्छ, इन्स्टिच्युट अफ इन्भायरमेन्टल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अनुसार।
मोल्ड: 3-12 μm
ब्याक्टेरिया: 0.3 देखि 60μm
वाहन उत्सर्जन: 1-150μm
शुद्ध अक्सिजन: 0.0005μm
HEPA फिल्टरले कसरी काम गर्छ?
छोटकरीमा, HEPA फिल्टरहरूले फाइबरको जटिल जालमा वायु प्रदूषकहरूलाई जालमा पार्छ। कणहरूको आकारमा निर्भर गर्दै, यो चार फरक तरिकामा हुन सक्छ: जडत्व टक्कर, प्रसार, अवरोध वा स्क्रीनिंग।
ठूला प्रदूषकहरू जडत्व प्रभाव र स्क्रिनिङद्वारा फसेका छन्। कणहरू फाइबरसँग टकराउँछन् र समात्छन्, वा फाइबरहरू पार गर्न खोज्दा समात्छन्। मध्यम आकारका कणहरू फिल्टरको माध्यमबाट जाँदा, तिनीहरू फाइबरद्वारा फँस्छन्। साना कणहरू फिल्टरको माध्यमबाट गुज्रने बित्तिकै फैलिन्छन्, अन्ततः फाइबरसँग टकराउँछन् र फँस्छन्।
के एयर प्युरिफायरहरू COVID-19 अवधिको लागि मात्र हुन्?
Covid-19 सँग डिल गर्नमा ठूलो मद्दत हुनुको अलावा, एयर प्युरिफायरहरूले कोभिड-१९ प्रकोप पछि हावाको गुणस्तर सुधार गर्न जारी राख्न सक्छ, विद्यालय वा कार्यालयहरूमा चिसोको घटनालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ। यसले हावाबाट एलर्जीहरू फिल्टर गर्दछ र पराग मौसममा एलर्जी समस्याहरू रोक्छ। आर्द्रता कार्यको साथ हावा प्युरिफायरले आर्द्रतालाई विनियमित र नियन्त्रण गर्न, श्वासप्रश्वासको मार्गको सुरक्षा गर्न र सुख्खा हावाबाट हुने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूलाई रोक्न सक्छ।
nanocrystals के हो?
नानोक्रिस्टलहरू सेपियोलाइट, एटापुल्गाइट र डायटोमाइट (डायटोम माटो) हुन्, जुन प्रकृतिमा दुर्लभ गैर-धातु खनिजहरू हुन् र प्रशस्त छिद्र खनिज शोषकहरू हुन्। यी खनिजहरूको उचित कन्फिगरेसन पछि, न्यानोक्रिस्टलहरू हावा शुद्ध गर्ने एजेन्ट उत्पादनहरूको रूपमा गठन हुन्छन्। ती मध्ये, सेपियोलाइट र एटापुल्गाइटको नानो-जालीले हावामा फॉर्मल्डिहाइड, बेन्जिन, अमोनिया र अन्य विषाक्त र हानिकारक नानो-स्तर साना आणविक ध्रुवीय पदार्थहरू अवशोषित गर्न सक्छ, जबकि डायटोमाइटले माइक्रोन-स्तरको म्याक्रोमोलेक्युलर हावा अशुद्धताहरू मात्र अवशोषित गर्न सक्दैन, तर यो पनि प्रदान गर्दछ। नैनो-खनिज क्रिस्टलहरूको सोखना प्रभाव सुधार गर्न नानो-खनिज क्रिस्टलहरूको लागि सोखना च्यानलहरू। नानोमिटर मिनरल क्रिस्टल एयर प्युरिफायरमा तीनवटा मुख्य विशेषताहरू छन्: छिटो सोख्ने गति, पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने, र ध्रुवीय अणुहरूलाई फिल्टर गर्ने।
मोबाइल कीटाणुशोधन मेसिनको कीटाणुशोधन प्रक्रिया के हो?
कर्मचारीहरूले कीटाणुशोधन गर्ने मेसिनलाई त्यस क्षेत्रमा राख्छन् र ढोका, झ्यालहरू, एयर कन्डिसनर र ताजा हावा प्रणाली बन्द गरेपछि कीटाणुशोधन प्रक्रिया सुरु गर्छन्। रोबोट स्वचालित रूपमा चल्छ र माइक्रोन ड्राई-फगको रूपमा कीटाणुनाशक इन्जेक्ट गर्दछ। निर्धारित मार्ग र कीटाणुशोधन सूत्र अनुसार कीटाणुशोधन प्रक्रिया पूरा गरेपछि, सुख्खा हावाले 30 देखि 60 मिनेटसम्म हावालाई कीटाणुरहित गर्न जारी राख्छ। कीटाणुशोधन पूरा भएपछि, 30 मिनेटको लागि प्राकृतिक भेन्टिलेसनको लागि ढोका र झ्यालहरू खोल्नुहोस्, र त्यसपछि हावामा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एकाग्रता दर पत्ता लगाउनुहोस्। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइडको घनत्व 1ppm भन्दा कम हुन्छ, मानिसहरू भित्र पस्न सक्छन्, र कीटाणुशोधन पूरा हुन्छ।
सुख्खा कुहिरो नसबंदी गर्ने मेसिनमा कस्तो प्रकारको कीटाणुनाशक प्रयोग गर्नुपर्छ?
उपकरणले कीटाणुनाशकको ​​रूपमा परमाणुयुक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग गर्दछ। 7.5% (W/W) को एकाग्रताको साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधान तरल रूपमा मेसिनमा इंजेक्शन गरिन्छ। परमाणुकरणको माध्यमबाट, हावामा र वस्तुहरूको सतहमा माइक्रोबियल प्रोटिन र आनुवंशिक सामग्रीलाई विकृत गर्न हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई बन्द ठाउँमा लगातार छर्किन्छ, जसले गर्दा सूक्ष्मजीवहरूको मृत्यु हुन्छ, र परिणाम स्वरूप, कीटाणुशोधनको उद्देश्य प्राप्त हुन्छ।
मेसिनद्वारा कस्ता प्रकारको फंगसलाई कीटाणुरहित गर्न सकिन्छ?
Staphylococcus albicans, प्राकृतिक हावा ब्याक्टेरिया, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis र अन्य कालो प्रजातिहरू परमाणु र मारिएका थिए।
यो कति टाढा छिर्न सक्छ?
atomizing बुद्धिमान कीटाणुशोधन रोबोट को प्रत्यक्ष इंजेक्शन व्यास5मिटर भन्दा बढी छ, र पोर्टेबल कीटाणुशोधन मिसिन को इंजेक्शन व्यास3मिटर भन्दा बढी छ। कीटाणुरहित हुने कोठालाई ब्राउन आन्दोलनले छिट्टै ढाक्न सकिन्छ।
मेसिन कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
बुद्धिमानी कीटाणुशोधन मेसिनलाई ट्याब्लेटद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, एक कुञ्जीबाट सुरु गर्नुहोस्, कीटाणुशोधन प्रक्रियाको क्रममा विस्तृत र सही उपयोग डेटा। कीटाणुशोधन प्रक्रिया सांख्यिकीय रूपमा उपलब्ध छ र दस्तावेज / भण्डारण गर्न सकिन्छ।
चार्जले कति ठाउँलाई कीटाणुरहित गर्न सकिन्छ?
हाइड्रोजन पेरोक्साइड बुद्धिमान कीटाणुशोधन रोबोटले एकल चार्जमा 1500m³ को अधिकतम ठाउँ कीटाणुरहित गर्न सक्छ, पोर्टेबल कीटाणुशोधन मेसिनले 100m³ को अधिकतम ठाउँको कीटाणुरहित गर्न सक्छ, वाष्पीकरण कीटाणुशोधन मेसिनले 300m³ को अधिकतम ठाउँलाई कीटाणुरहित गर्न सक्छ, र पराबैंगनी मेसिनले 300m³ को अधिकतम ठाउँलाई कीटाणुरहित गर्न सक्छ। 350m³ को अधिकतम ठाउँ।
के कीटाणुशोधन रोबोटले अवरोधहरूबाट बच्न सक्छ?
हो। हाम्रो कीटाणुशोधन रोबोटले लेजर, अल्ट्रासोनिक, डेप्थ क्यामेरा, इत्यादि जस्ता धेरै अवरोध परित्याग सेन्सरहरू प्रयोग गरेर स्व-नेभिगेसन र स्वचालित कीटाणुशोधन हासिल गर्न सक्छ। सटीक स्थिति र सरल अवरोध जोगिने महसुस गर्न सकिन्छ।
वारेन्टी कति लामो छ?
त्यहाँ सम्पूर्ण मेसिनको लागि एक वर्षको वारेन्टी छ, बिक्रीको मितिबाट गणना गर्दै (बीज उपलब्ध गराइनुपर्छ)। यदि कीटाणुशोधन मेसिन वारेन्टी अवधि भित्र छ भने। उत्पादन आफैले गर्दा गल्तीहरू नि: शुल्क मर्मत गर्न सकिन्छ।
हामी किन nanocrystal फिल्टरहरू छनौट गर्छौं?